Maze Runner: The Death Cure (2018) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
အမရေိကနျစာရေးဆရာ James Dashner ရဲ့The Maze Runner series မှတတိယမွောကျစာအုပျဖွဈတဲ့ The Death Cure ကိုအရငျဇာတျကားတှကေို ရိုကျကူးတဲ့ဒါရိုကျတာ Wes Ball ပဲရိုကျကူးထားပွီး Dylan O’Brien, Thomas Bordie-Sangster, Rosa Salazar, Ki Hong Lee, Kaya Soladiaro, Dexter Darden, Aiden Gillen, Barry Pepper,Patricia Clarkson, Will Poulter, Gnaicalo Esposito, Walton Goggins တို့ပါဝငျထားပါတယျ။ 2017 February 17 မှာ ရုံတငျဖို့စီစဉျထားခဲ့သျောလညျး Dylan O’Brien ရိုကျကှငျးမှာထိခိုကျမှုဖွဈပှားပွီး ရုံတငျရကျကိုတဈနှဈနီးပါးနောကျဆုတျခဲ့ရပါတယျ။
အခုဒီကားထဲမှာတော့ပထမ၂ကားထဲက လှတျမွောကျလာကွတဲ့ကောငျလေး တှထေဲကThomas က လှတျမွောကျလူသူတှကေို စုစညျးပွီး Glader ဆိုတဲ့အဖှဲ့ကိုတညျထောငျထားပွီး အဓိကရညျရှယျခကျြက သူ့သူငယျခငျြးတှကေို ကယျဆယျဖို့ပါ။ ဒီလိုနဲ့ တဈရကျမှာ မလှတျသေးပဲ ကနျြနခေဲ့သေးတဲ့သူ့သူငယျခငျြးတှကေို တငျဆောငျလာတဲ့ ရထားကိုဖွတျတိုကျပွီးတော့ ကယျဖို့ကွိုးစားရငျး မအောငျမွငျပဲThomas ,Newt နဲ့Frypanတို့ Cranks(Zombie)တှရှေိနတေဲ့ Tunnelထဲကို ရောကျသှားပွီး အန်တာရယျတှနေဲ့ ရငျဆိုငျကွရပွီးတော့ သူတို့ထဲကမှ ဒီဖုတျကောငျကူးစကျတဲ့ရောဂါကိုခံနိုငျရညျရှိတာကတော့ မငျဟိုဆိုတဲ့ ကောငျလေးပါ။
ဒီလိုနဲ့ မငျဟိုကို ဖွဆေေးဖျောဖို့ The Last City မွို့ကလူတှကေ လိုကျဖမျးရငျးနောကျဆုံးမှာ သူတို့ ဘယျလိုတှဖွေဈကွမလဲ။ ဖုတျကောငျတှေ ရနျကကော ကာကှယျနိုငျပါ့မလား။ Maze ထဲကလှတျမွောကျလာတဲ့ပထမဆုံး Runner တှကေကော ဘာအတှကျ ထှကျပွေးနရေတာလဲ ဆိုတာကိုတော့ ပရိတျသတျကွီးက ဆကျလကျကွညျ့ကွရမှာပါ…….
အမေရိကန်စာရေးဆရာ James Dashner ရဲ့The Maze Runner series မှတတိယမြောက်စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ The Death Cure ကိုအရင်ဇာတ်ကားတွေကို ရိုက်ကူးတဲ့ဒါရိုက်တာ Wes Ball ပဲရိုက်ကူးထားပြီး Dylan O’Brien, Thomas Bordie-Sangster, Rosa Salazar, Ki Hong Lee, Kaya Soladiaro, Dexter Darden, Aiden Gillen, Barry Pepper,Patricia Clarkson, Will Poulter, Gnaicalo Esposito, Walton Goggins တို့ပါဝင်ထားပါတယ်။ 2017 February 17 မှာ ရုံတင်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့သော်လည်း Dylan O’Brien ရိုက်ကွင်းမှာထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီး ရုံတင်ရက်ကိုတစ်နှစ်နီးပါးနောက်ဆုတ်ခဲ့ရပါတယ်။
အခုဒီကားထဲမှာတော့ပထမ၂ကားထဲက လွတ်မြောက်လာကြတဲ့ကောင်လေး တွေထဲကThomas က လွတ်မြောက်လူသူတွေကို စုစည်းပြီး Glader ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ထားပြီး အဓိကရည်ရွယ်ချက်က သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို ကယ်ဆယ်ဖို့ပါ။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက်မှာ မလွတ်သေးပဲ ကျန်နေခဲ့သေးတဲ့သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို တင်ဆောင်လာတဲ့ ရထားကိုဖြတ်တိုက်ပြီးတော့ ကယ်ဖို့ကြိုးစားရင်း မအောင်မြင်ပဲThomas ,Newt နဲ့Frypanတို့ Cranks(Zombie)တွေရှိနေတဲ့ Tunnelထဲကို ရောက်သွားပြီး အန္တာရယ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြရပြီးတော့ သူတို့ထဲကမှ ဒီဖုတ်ကောင်ကူးစက်တဲ့ရောဂါကိုခံနိုင်ရည်ရှိတာကတော့ မင်ဟိုဆိုတဲ့ ကောင်လေးပါ။
ဒီလိုနဲ့ မင်ဟိုကို ဖြေဆေးဖော်ဖို့ The Last City မြို့ကလူတွေက လိုက်ဖမ်းရင်းနောက်ဆုံးမှာ သူတို့ ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကြမလဲ။ ဖုတ်ကောင်တွေ ရန်ကကော ကာကွယ်နိုင်ပါ့မလား။ Maze ထဲကလွတ်မြောက်လာတဲ့ပထမဆုံး Runner တွေကကော ဘာအတွက် ထွက်ပြေးနေရတာလဲ ဆိုတာကိုတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးက ဆက်လက်ကြည့်ကြရမှာပါ…….
Option 1 server.mfile.cloud 679 MB SD (480p)
Option21fichier.com 679 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 679 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 679 MB SD (480p)
Option7yuudrive.me 1.6 GB HD (1080p)
Option 8 1fichier.com 1.6 GB HD (1080p)
Option9server.mfile.cloud4GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 10 sharer.pw4GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 12 1fichier.com4GB FHD (1080p) DTS 5.1